Heather Willis – Tractor Loader
“ယောဟန်မင် js36 ဝယ် |ယောဟန်မင်မြက်ရိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုဝယ်ယူရန်”
၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ပြသခဲ့တဲ့ Love Wind Love Song ရုပ်ရှင်ကားမှာ အတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး ကိုဆိုယောင်း (Ko So-young) နဲ့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ မေလ ၂ ရက်နေ့မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သားဦးလေး ဂျန်မင်ဂျွန် (Jang Min-joon) ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးဖြစ်တဲ့ သမီးလေးကိုတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
ထရပ်ကားဒီဇိုင်းလွယ်ကူခြင်း KAMAZ-45143, ဝန်ဆောင်မှုဘူတာနှင့်အပိုပစ္စည်းများ၏ရရှိနိုင်မှု၏ကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်ကိုစျေးကွက်အပေါ်အဓိကစက်ယန္တရား၏ဤပုံစံတစျခုပါစေ။ ယနေ့အထိ, ကုန်တင်ကားအရေးပေါ်သိမ်းထား KAMAZ-45143 ရုရှားတွင်အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်ခန့်မှန်း။ Kamas မော်တော်ယာဉ်စက်ရုံအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်မူဝါဒကျင်းပနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်တုံ့ပြန်မှုများကိုထရပ်ကားဝယ်လက်အတွက်အကျိုးဆက်တစ်ခုတိုးလာ KAMAZ-45143။ ယခုအချိန်တွင်မှာ KAMAZ-45143 နီးပါးကိုအကောင်းဆုံးကမ္ဘာကြီး Analogues ယုတ်ညံ့အချည်းနှီးဖြစ်၏။
ဖွင့်နည်းလမ်းကို pads သည့်အရာတစ်ခုအတွက်ခြွင်းချက်မရှိအထီးကျန်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာသည့်အရာတစ်ခုဟာ operating နှင်တံကနေလျှပ်စစ်အထီးကျန်ကြောင်းသတိရထို့ကြောင့်လွဲချော်ရမည်ဖြစ်သည် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဇုန် ECP ။ ဒါဟာနင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏လျှောက်လွှာများအပါအဝင်ချေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသည့်အရာတစ်ခုဤနည်းလမ်းများ, အပေါငျးတို့သသုံးစွဲဖို့ထို့ကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ျပသခဲ့တဲ့ Love Wind Love Song ႐ုပ္ရွင္ကားမွာ အတူသ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ မင္းသမီး ကိုဆိုေယာင္း (Ko So-young) နဲ႔ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာ လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သားဦးေလး ဂ်န္မင္ဂၽြန္ (Jang Min-joon) ကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယေျမာက္ရင္ေသြးျဖစ္တဲ့ သမီးေလးကိုေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။
မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဝင္ကေက်း႐ြာတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ေဟာင္း ျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္း သုေတသနလုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို မည္သည့္ခုႏွစ္မွစတင္၍ မည္သည့္အေျခအေန အထိ ေဆာင္႐ြက္ပါမည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပထမအႀကိမ္အတြင္း သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္ သုေတသန ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အထိ ဝင္းကေက်း႐ြာ၊ အရက္သည္မ ေက်း႐ြာတို႔တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္အတြင္း သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္မႈ သုေတသနလုပ္ငန္းကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မြန္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တူးေဖာ္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မည့္ လ်ာထားခ်က္အေနျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္းခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လ်ာထားသတ္မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္အခါ ေတြ႕ရွိခ်က္ရလဒ္မ်ား ေပၚမူတည္၍ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္ ၂ ႀကိမ္ ထပ္မံသုေတသနျပရန္ စီမံကိန္းကိုလည္း လ်ာထားပါေၾကာင္း။
biogas အဆိုပါ bioreactor သုံးပြီးတစ်ပြိုင်နက်သူတို့ထဲကအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာရရှိရန်ဇီဝစွန့်ပစ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးရန်။ bug ၏ကျယ်ပြန့်တပ်ဆင်အများအပြားပြုပြင်မွမ်းမံရှိပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။
ဒေသခံထုတ်လုပ်သူများနှင့်အသစ်ခြံထောက်ပံ့ရည်ရွယ်အစိုးရအစီအစဉ်များ။ ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များလက်အောက်တွင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောလယ်သမားလယ်ယာစိုက်ပျိုးများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေ, ထောက်ပံ့မှုများ, အခွန်မက်လုံးအဖြစ် start-up မြို့တော်သို့မဟုတ်မြေယာကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်;
ဝန်ကြီးဖြစ်သူ မစ္စမီးလားဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ အဓိက အတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ လေဘာပါတီရဲ့ အောက်မှာ ရက်ပေါင်း များစွာ ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အတိုက်ခံပါတီရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံနေရတဲ့ တချိန်ထဲမှာ မိခင်ကွန်ဆာဗေးတစ် ပါတီက ပါတီဝင်များရဲ့ ဝေဖန်မှုကိုလည်း အကြီးအကျယ်ခံရပါတယ်။ မစ္စမီးလားဟာ အိမ်တလုံးကို အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ဝယ်ယူထား ပါတယ်။ အစိုးရဆီကို တင်သွင်းတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ငွေတွေကို အစိုးရကိစ္စများအပေါ်မှာ သုံးစွဲတာထက် အဲဒီအိမ်အတွက် အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ပေးရတဲ့အပေါ်မှာ သုံးနေတယ်လို့ စွပ်စွဲခံရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စက်မှုရိတ်သိမ်းအသီးဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းအပင်များနှင့်အားလုံးသဘောကျ၏ယူနီဖောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတယူဆတယ်။ စက်မှုလယ်ယာ၏ရှုပ်ထွေး ရိတ်သိမ်းဖရဲသီး အပင်၏ဇီဝဗေဒ features တွေအသီးအပွများ၏ထပ်ခါတလဲလဲရငျ့ခြားနားချက်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစား, အစွမ်းထက်•အအစုလိုက်အပြုံလိုက်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
ထိုကဲ့သို့သောမကောင်းတဲ့အတှေ့အကွုံပြီးနောက်တစ်စုံတစ်ဦးကဤအမှုကိုပစ်, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေအရှုံးမပေးနဲ့ထိုကဲ့သို့သောမြို့ဆင်ခြေဖုံး၌ရှိသကဲ့သို့မိမိတို့၏နယ်မြေထဲမှာ, ဆိုက်ဘေးရီးယားတွင်, Urals ထဲမှာ, အလယ်တန်းဇုန်အတွက်ဖရဲသီးကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေရန်စတင်ကြပါဘူး။
“စိတျအပိုငျး deere |မဝယ်သင့်ပါတယ်ကိုယ့်တစ်ယောဟနျသမင် snowblower ဘယ်မှာဝယ်နိုင်”
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျမှတျပုံတငျရမည်ဖြစ်သည် တစ်ဦးချင်းစီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများများအတွက်အရည်အသွေးလက်မှတ်များထုတ်ပေးပါတယ်။ အားလုံးအသားထုတ်ကုန်တစ်ခုတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးစာမေးပွဲရှောက်သွားရကြမည်။
လူ႔ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားလာ သည္ႏွင့္အမွ် လူတို႔သည္ ေရႊကို လက္ဝတ္ရတနာမ်ားအျဖစ္ ပံုသြန္း ကာ ဝတ္စားဆင္ယင္လာၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရႊကို ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ သံုးစြဲလာခဲ့ၾကသည္။ ေငြေၾကး အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေရႊကိုသံုးစြဲလာၾကရာ ေရႊတြင္ ေစ်းႏႈန္းရွိသည္။လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေရႊကိုကုန္စည္ ေငြေၾကးအျဖစ္သံုးစြဲစဥ္က ေရႊ၏ တန္ဖိုးကို ေရႊႏွင့္လဲလွယ္မည့္ မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာခဲ့ ၾကသည္။ ဥပမာ ႏြားတစ္ေကာင္ကို ေရႊတစ္က်ပ္သား၊ အကႌ်တစ္ထည္ လွ်င္ ေရႊတစ္မတ္သား စသည့္ျဖင့္ တိုင္းတာခဲ့ၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ စာဖတ္သူသိထားသည့္ က်ပ္၊ ေဒၚ လာ၊ ပီဆို၊ ေပါင္စတာလင္၊ ယန္း၊ ဘတ္စသည့္ စကၠဴေငြေၾကးမ်ား မေပၚေပါက္ေသးပါ။ ေရႊ၏ ေစ်း ကြက္ေပါက္ေစ်းကို ေရႊတစ္ယူနစ္ (ဆိုပါစို႔) ေရႊတစ္က်ပ္သားႏွင့္ တန္ဖိုးညီေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာေဖာ္ျပ ခဲ့ၾကသည္။
တရုတ်နိုင်ငံသားများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော် အကျိုးစီးပွားကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေသည့် ကွန်ရက် အသွားအလာနှင့် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် ဆင်ဆာပြုလုပ်ရန် တရုတ် အစိုးရသည် နက်ရှိုင်းသော အစုံလိုက်သုံးပက်ကက် စစ်ဆေးခြင်းကို အသုံးပြု သည်။ ထိုအရာတွင် ကာမရာဂစိတ် ဖြစ်စေရန်ရေးသားပြသမှု ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သတင်း အချက် အလက်နှင့် နိုင်ငံရေး သဘောထားကွဲလွဲမှုတို့ ပါဝင်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းရှိ လူ အများ သည် နောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာများပါဝင်သည့် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် များကို ဆက်သွယ်ရာတွင် တားဆီးပိတ်ဆို့ခြင်းခံရကြောင်း တွေ့ရှိလေ့ရှိသည်။
tipper KAMAZ-45143 အစွမ်းထက် KamAz 740.31 240 က c တာဘိုအလယ်အလတ်လေထုအအေးတပ်ဆင်ထားတဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်။ အင်ဂျင် KAMAZ-45143 ပတ်ဝန်းကျင်စံချိန်စံညွှန်းများယူရို-2 နှင့်အတူလိုက်နာနှင့် KAMAZ-45143 ၏မော်ဒယ်ဥရောပများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အများဆုံးအင်ဂျင်ပါဝါကိုထရပ်ကား KAMAZ-45143 240 မြင်းကောင်ရေနှင့် 10,85 လီတာ၏လေဖြတ်အသံအတိုးအကျယ်။
အဆိုပါပိုက်တခြားရှေ့ဆက်အပေါ်ဂျက် switching အားဖြင့်သံသရာတွန်းများနှင့်ရွေ့လျားမှု reverse ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလဲလှယ် headband တွန်းအားပေးကျရှညျ nozzle, ramrods သို့မဟုတ် clamping ကော်ရှောက်သွားပြွန်မှဂျက်၏ဖိအားပေးမှု။ 1 ကိုနှိပ် extension ကို nozzle အရှည်လျှောက်ထားခုနှစ်တွင်, 2, ပုပေါက်လေဖြတ်ခြင်း၏လှံတံ၏အရှည်အားဖြင့်မြေပြင်သို့ပြွန်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်3နဲ့4မီတာ (ဥပမာ, 1 မီတာ) ပင်စည်မူရင်းအနေအထားမှပြန်လာသောဖြစ်ပါတယ်နှင့်ရရှိလာတဲ့အာကာသနှစ်ဆအရှည်၏အခြားပိုက်ထဲသို့ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဒါသည်အထိဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် ကိုလက်စသတ်ထိုးဖေါက်ခြင်းယူနစ်ပထမဦးဆုံးပြွန် (ပုံမှန်အားဖြင့်6မီတာ) အထိပါပဲ။ ထို့နောက်ဒုတိယ link ကိုရမညျ welded နှင့်ပိုက်လိုင်းတစ်ခုလုံးအရှည်ပြီးစီးသည်အထိဤအစစ်ဆင်ရေးဟာထိုးဖေါက်ခြင်းသည်အထိထပ်ခါတလဲလဲနေကြသည်။
– ဖရဲသီး 10-15 ကီလိုဂရမ်, စည်းကမ်းအဖြစ်, စူပါမားကက်မှမသွားဘူး။ 1-2 ကီလိုဂရမ်၏တစ်ဦးက portioned အသီးအပွကားတစ်စီးစည်ထဲမှာထားရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါဟာအချိန်ကဝယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်တက်ခူးစားမဆိုမိန်းကလေးနိုင်ပါတယ်, – Tufts ကပြောပါတယ်။ – ထို့အပြင်ဝယ်လက်ကျွန်တော်တို့ကိုသို့မဟုတ်အလွန်ကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်အလွန်သေးငယ်တဲ့ဖရဲသီးအဘို့အလာ။ သငျသညျတူညီသောစျေးနှုန်းမှာ Volgograd အတွက်ဖရဲသီးယူနိုင်လျှင်အဘယ်သူမျှမကိုသွားရလိမ့်မယ်။
ဒီေန႔ ေငြလဲလွယ္ နႈန္းထားေတြ ကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၃ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၅၃၁ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၈၄ ဒသမ ၆၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၂၈ ဒသမ ၆ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၀၀ ဒသမ ၁၅ က်ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးရား ၁၀၀ ကို ၁၀ ဒသမ…
၎င်း၏အမြင့်ဆုံး permeability ကြောင့်, Kamaz 45143 ဒါဟာချွတ်-လမ်းအခြေအနေများအတွက်သုံးနိုင်တယ်။ ရောင်းရန် KAMAZ 45143 စားသုံးသူများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသောပစ္စည်းများအများအပြားအမျိုးမျိုးထွက်ယူသွားတတ်၏: တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူမော်ဒယ် 45143 ၏ဗားရှင်းရွေးနိုင်သည်။
ပျမ်းမျှအားတွင်, နွားတစ်နေ့လျှင်နို့၏ 20 လီတာကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ နို့၏ 10 လီတာ၏ပထမဦးဆုံး2လနို့တိုက်ကျွေးသောနွားသို့ဝင်။ အနာဂတျတှငျအပေါငျးတို့နို့ရောင်းချရန်အဘို့ဖြစ်၏။2လဟိုတယ်မှဆေးရုံကဆင်းဖြစ်ကြောင်းပေးထား, နို့၏ရောင်းအားမှာတစ်နှစ်များ၏စီစဉ်ထားအသံအတိုးအကျယ်နွားမတစ်ဦးလျှင် 5400 လီတာဖြစ်လိမ့်မည်:
ဓါတ်ပေါင်းဖိုအပူချိန်၏အလုပ်လုပ်ကိုင်အပိုင်းမှာတော့အမြဲအခြားနှစ်ဦးကိုပုဒ်မအတွက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဒါဟာဓာတုဖြစ်စဉ်ကိုသံသရာ၏ပြည့်စုံသေချာနဲ့ productivity တိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါဇီဝလောင်စာဓာတ်ပေါင်းဖို၏ဤအပိုငျးတှငျထို biogas ၏ထွက်ပေါက်တားဆီး, ရေပေါ်အဖုံးကာကွယ်ပေးသည်စဉ်ဆက်မပြတ်နှိုးဆော်ကြ၏။
ေရႊသတၱဳႏွင့္ ေငြသတၱဳမ်ားကို ေငြအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း၏ အဓိက ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မွာ ေရႊတံုး ေငြတံုးမ်ား သည္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးခ်င္းမတူညီ ၾကေခ်။ ေရႊတံုး၊ ေငြတံုးမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပမာဏခ်င္းမတူညီ ႏိုင္သကဲ့သို႔၊ စစ္မစစ္၊ ေရႊရည္သို႔ မဟုတ္ ေငြရည္ အတိုင္းအဆမ်ား မတူညီႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္ေပၚရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္အေရာင္း အဝယ္လုပ္ရာတြင္ တစ္ႀကိမ္ေရာင္း တိုင္း ေရႊစစ္မစစ္၊ အေလးခ်ိန္မွန္မ မွန္၊ အရည္အေသြးေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးရသည္မွာ အလုပ္႐ႈပ္၍ အခ်ိန္ကုန္ အလုပ္မတြင္ၾကေခ်။ ထို႔ ေၾကာင့္ အရည္အေသြး၊အေလးခ်ိန္၊ အမ်ဳိးအစားေသခ်ာေစရန္ ေရႊ၊ ေငြ မ်ားကို စံသတ္မွတ္သံုးစြဲ လာၾက ပါသည္။ ေရႊ၏ တန္ဖိုးကို အေျချပဳ၍ ကုန္စည္လဲလွယ္ရာတြင္ တန္ဖိုး အတိုင္းအတာအျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ေငြေၾကးစနစ္ကို ေရႊစံခ်ိန္စနစ္ဟု ေခၚပါသည္။ ေရႊၿပီးေနာက္ ေငြကို ဒုတိယအျဖစ္စံထား၍ သံုးစြဲၾက သည္။ ေရႊႏွင့္ေငြ (sliver) ကို တန္ဖိုး တိုင္းတာေရး ကိရိယာအျဖစ္ သံုးစြဲ ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို သတၱဳႏွစ္မ်ဳိး သံုးစံ ခ်ိန္ (bimetallic standard) ဟု ေခၚပါသည္။
ယနေ့အထိ, directional တူးဖော်ခြင်းမြေအောက် utilities နှင့်မည်သည့်မြေအောက်အကျင့်ကိုကျင့်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုတည်ဆောက်ရန်အရှိဆုံးစီးပွားရေးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့လက်နှင့်အတူကတုတ်ကျင်းတွေထဲကများ၏တူးနဲ့နှိုင်းယှဉ် directional တူးဖော်ခြင်း, အောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်:
45143 dumpers အလွန်အမင်းစားသုံးသူများကတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ KAMAZ 45143 ကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်၏မျက်နှာသာအတွက်အငြင်းပွားမှုများတွေထဲမှာသူတို့တစ်တွေအနိမ့်သောစျေးနှုန်း, ကောင်းသောမြင်ကွင်း, တည်ငြိမ်မှု, ကိုင်တွယ်ခြင်း, အပူသက်သာခြင်းကိုခေါ်ပါ။ KamAZ 45143 – ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများထရပ်ကားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုလေ့လာအခြိနျများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှအတည်ပြုပြီးသောအမှိုက်ပုံထရပ်ကား။
“ယောဟန်မင်ထုတ်ကုန်ရောင်းချတဲ့သူဆရာယောဟနျသမင် d105 ဝယ် _ရောင်းချတဲ့သူဆရာယောဟနျသမင်ဆေးသုတ်”
Chernojarsky ဧရိယာ၏လယ်သမားဗလာဒီမာ Zvolinsky အဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအဖို့စမ်းသပ်မှုထက်ပိုမို 10 နှစ်ပါ။ 95 မှာသူသည်မိမိ site ပေါ်တွင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖရဲသီး hybrids တွေကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကကြီးမားသောနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, ဒါ့အပြင်ပြည်တွင်းရှိပါတယ်ဥပမာ – အဘို့, အမျိုးမျိုး “mascot”, “ချယ်ရီ”, “Ataman” ။ Zvolinsky သူဒီနှစ်ဖရဲသီးမျိုးစေ့ကိုမကြဲခဲ့သလဲ, အားလုံးတပ်ဖွဲ့များကပြောပါတယ် “ဟုလေးကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ ” နောက်နှစ်သူစင်းသီးနှင့်အတူနောက်တဖန်စမ်းသပ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလျှောက်ထားနှငျ့ “Anti-အိုမင်းနည်းလမ်း။ ” မည်အကြောင်း,
stacking များအတွက်လာကြတယ်နည်းလမ်း သတ္တုပိုက်များ ကြီးမားသောအချင်း (800 မီလီမီတာ) ။ နှင့်၎င်း၏အဓိက features တွေထဲကတစ်ခုတုတ်ကျင်းတူး၏လိုအပ်ချက်များ၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကို 80 မီတာထက်ပိုရှည်မဟုတ်ပိုက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက်မွကွေီး၏အဆုံးမှာတစ်ဦးဓါးနှင့်အတူသံမဏိကိစ္စတွင်ဖိဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်ပါဝင်ပါသည်။ ထို့နောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ထွက်သန့်စင်ဖို့လိုသည်ပြွန်ထဲသို့သွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်အလုပ်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏနှင့်ဆက်စပ်ပိုက်လိုင်းဖွင့်လှစ်တင်သော။ ထို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကနည်းလမ်းကပိုမကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချွေတာကိုပိုချွေသော်လည်း, ရွာ၏အရေးပါသောအလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတားဆီးမထားဘူး။
ဧရာဝတီဘဏ်၏ ချေးငွေဖြင့် Farmer Choice Co.,Ltd နှင့် Shwe Htwet Toe Co.,Ltd တို့က ကျပ်သိန်း ၂၇၀ မှ ကျပ်သိန်း ၄၀ဝ ခန့် တန်ဖိုးရှိသည့် လယ်ထွန်စက် ၁၀ဝ၀ ကို အရစ်ကျ ငွေပေးချေသည့် စနစ်ဖြင့် ရောင်းချနိုင်ရန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်လျက်ရှိရာ မနေ့က နေပြည်တော်ရှိ Lake Garden ဟိုတယ်တွင် ဧရာဝတီဘဏ်၊ ရောင်းချမည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ဝန်ကြီးဌာနတို့ကြား သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မြင်နိုင်ပါသည်အမျှမိမိတို့လက်နှင့်အတူအလမ်းအောက်ထိုးဖေါက်ခြင်းရှိဒါခက်ခဲသည်မဟုတ်။ ရလဒ်အဖြစ်အားဖြင့်အတွင်းပိုင်းလှံတံကိုလမ်းပြဆွန်းပြွန်နှင့်အတူလှည့်သင့်ပါတယ်။ ရေကိုစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းအပေါငျးတို့သအမှိုက်ထုတ်ဆေးကြောအတိုင်းဤ pin ကိုယခုအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သေးငယ်ချင်း၏ဒုတိယတံဆိပ်ခတ်ပိုက်ကိုင်ပြီးများအတွက်ကိုင်ဆောင်သူအဖြစ်ရရှိလာတဲ့ပိုက်လိုင်းအသုံးပြုခြင်း။
အဆိုပါရထားလမ်းဖရဲသီးစိုက်ပျိုးနည်းပညာကိုကြီးထွားလာရာသီနီးပါးတပြင်လုံးကိုကာလအဘို့အကြားတန်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းဖန်တီးအခါ။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, အမှတ်စဉ်စိုက်ပျိုးမှု: RPS-5,4; KRN-4,2; KRN-5,6a; UKR-5,6; CDF-4,2 သို့မဟုတ် 9,1-wide-RBM ။ Interrow အပြောင်းအလဲနဲ့စိုက်ပျိုး, weedy မြေဆီလွှာများ, အလတ်စားနှင့်အကြီးစား-textured အလုပ်လုပ်အလောင်းတွေစိုက်ပျိုးမှု၏စံသတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြု. Pre-ပေါ်ပေါက်ရေးစိုက်ပျိုးမှုနဲ့စတင် (ပေါင်းပင်၏ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့လိုက်လျောညီထွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ 5.4 နှင့်အတန်းဧရိယာ၌မြေဆီလျော့ပေါ့ပစ်) ။ အလင်းမြေဆီလွှာထဲတွင်ဘယ်မှာနက်ရှိုင်းဖွဲ့စည်းထွန် coulters အမျိုးအနွယ်ကိုမျိုးစေ့ကြဲမှာကအတန်းနှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်ကုန်းဖျက်ဆီးဖို့လိုအပ်ပေသည်။ တစ်ဖက်သတ်ဖော (မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်) မျိုးစေ့ကြဲရာမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ကုန်း aligned ထားတဲ့ပါးပြင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာပျိုးပင်သလိုပဲများ၏အန္တရာယ်မရှိဘဲနောက်ဆက်တွဲစိုက်ပျိုးမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ နေထွက်စိုက်ပျိုးမှု၏အသွင်အပြင်အကာအကွယ်ဒိုင်းသို့မဟုတ် discs တွေကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူထွက်ယူသွားတတ်၏ပြီးနောက်။ ကဝင်ရိုး line ကနေ 60-80 မီလီမီတာ၏အကွာအဝေးမှာနေရာယူထားကြောင်းဒါကြောင့်ပန်းကန် (disc ကို) ကိုအပိုင်းပေါ် fixed ဖြစ်ပါတယ်။ အတူလုပ်ကိုင်အလောင်းတွေစိုက်ပျိုးစောင့်ရှောက်မှုဖရဲသီးအပင်ထိုကဲ့သို့သော set ကို 4-5 ရွက် yaschih ပစ္စုပ္ပန်အဆင့်မတိုင်မီဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစိုက်ပျိုးခြင်းပြန်လည်စတင် sledoukazatelnyh ထွန်ကြောင်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါအတန်းမှာအပေါ်နှစ်ခု: ကြိမ်ဒဏ်စိုက်ပျိုးဘောင်များအတွက်အဆင့်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်သီးနှံများ၏ကုသမှုများတွင်ခြောက်လကဏ္ဍများကိုစွန့်ခွာ။ Interrow အပြောင်းအလဲနဲ့လေယာဉ်နှင့်အတူ shirokozahvatnymi ။ Non-ဆညျအခြေအနေများအတွက်များသောအားဖြင့်လုံလောက်သောအသံအပြောင်းအလဲနဲ့ ploskoreznoj ခြေထောက်။ ဒါပေမယ့်စိုစွတ်သောနှစ်များတွင် re-လုပ်ငန်းများ၌ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, နောက်ဆုံးစိုက်ပျိုးပြီးနောက် zaravnivanie sledoukazatelnyh ထွန်ကြောင်းအထဲကယူသွားတတ်၏။ ထွန်စက်၏ဘီးများကျမ်းပိုဒ်ကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာသပိတ်မှောက်ကြိမ်ဒဏ်အဘို့အ pleteukladchik စိုက်ပျိုးမှု NSC-5,4 နှင့် 5,4-CNB တူရိယာ (ရှေ့ချိတ်ဆက်) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြီးထွားလာရာသီကာလအတွင်းနှစ်ခုအတန်းအတွက် weeding, စည်းကမ်းအဖြစ်ထွက်ယူသွားတတ်၏။ ပထမဦးစွာ – စိုက်ပျိုးပြီးနောက်အပြည့်အဝပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်။ ဤသည်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအကောင်းဆုံးစက်ရုံသိပ်သည်းဆဖွဲ့စည်း, thinning နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒုတိယအချက်ပေါင်းသင်ပေးကြိမ်ဒဏ်၏အစောပိုင်းဖွဲ့စည်းရေးထွက်ယူသွားတတ်၏။ အသီး၏ဇီဝကမ္မမှည့် (ချည်ရဲ့ start ကနေ 30-35 ရက်) မှာဖရဲသီးစတင်သန့်ရှင်းရေးအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ mid-တန်းဖရဲသီးတဦးတည်းခြေလှမ်းအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏဆေးကြောသန့်စင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လက်ဖြင့်သို့မဟုတ်အထူးထွန်ခြစ်နှင့်အတူအသီးကိုသူတို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်နည်းလမ်းများလွှဲပြောင်းခဲ့သည်ရှိရာလိပ်သို့လှိမ့်။ တောင်ပိုင်းယူကရိန်းခုနှစ်, ကို double-entry ကိုဘုံသန့်ရှင်းရေးအသီးအပွဖရဲသီးကိုပထမဦးဆုံးသန့်ရှင်းရေးမှည့်သောအသီးကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်ဖျော်ဖြေနှင့် 12-15 ရက်အကြာမှာသောအခါ – ဒုတိယတစျခုအချိန်သန့်ရှင်းရေး၏နိယာမပေါ်မှာ။ တစ်ခါသုံးနှင့်အတူထက်နှစ်ကြိမ်-သန့်ရှင်းရေးပိုမိုမြင့်မားမှာဖရဲသီး၏အထွက်နှုန်း။
လယ်ယာအဖွဲ့အစည်းအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုချိုးဖောက်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူအတုအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတသမတ်တည်းသူတို့ကိုလိုကျနာနိုငျအောငျထိုကြောင့်သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. အလွန်ရှင်းလင်းသောဖြစ်ရမည်။
ထို႔အျပင္ ဝင္းကေက်း႐ြာရွိ ေျမလွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ၿခံပိုင္ရွင္ ၃ ဦးကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တူးေဖာ္သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူမ်ား ပိုမိုသိရွိေလ့လာႏိုင္ရန္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္လာႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သုဝဏၰဘူမိ သုေတသန အထူးျပပြဲကို ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္ (ေမာ္လၿမိဳင္) ၌ ၁၈-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂၄-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုကိုလည္း အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅-၂၀၅၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဝင္ကေက်း႐ြာရွိ တူးေဖာ္မႈကုန္း (၅) ကုန္းကို တူးေဖာ္သုေတသနျပဳခဲ့ၿပီး တူးေဖာ္မည့္ ေျမေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ေလ့လာ ကြင္းဆင္းေဖာ္ထုတ္ရွာေဖြရာတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပင္ပသမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားသူ ေဒသခံ႐ြာသူ၊ ႐ြာသားမ်ားကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ၾကၿပီး ဝင္းကေက်း႐ြာႏွင့္ ေကလာသေတာင္ေျခတစ္ဝိုက္တြင္ ကြင္းဆင္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဝင္းကေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၌ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားကို သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းကို ဦးစြာေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေက်း႐ြာအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ား၊ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားေသာ ေဒသခံ႐ြာသားမ်ား၊ ျပင္ပသမိုင္းပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးကုိ ဘီးလင္းၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၌ ထမ္မံက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၿပီး အားလုံးသေဘာတူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
“John Deere 장비 판매자 벨기에 트랙터”
5. 대버켓 – 보통버켓 보다 폭이 넓은 버켓이지만 논란이 많은 작업장치중 하나이다.위에 언급한 5종의 작업장치는 03급이하 영업용 굴삭기에서 기본세트나 마찬가지로 되어버렸는데, 그 시발점이 대버켓으로 부터 시작되었다. 기사들이 경쟁력을 높이려고 하나둘씩 구입하자 기본세트처럼 굳어져 왜 문제냐면 버켓용량을 초과하여 장비에 무리를 줄 뿐 아니라 예를들면 06급 굴삭기를 써야하는 상황에서도 03 굴삭기로 06급 굴삭기와 비슷한 버켓용량을 갖고있어서 06급 굴삭기를 찾지 않게되는 현상이 발생하였다. 아직도 중장비기사들간에 논란거리며 06급 이상은 장착하지 않게 서로 약속하고있는 상황이다. 작업용으로 쓰지 않을 때는 여기에 브레이커, 리퍼 등을 수납하기도 한다.
“존 디어 John Deere key 구매처”
빨리 읽고싶었는데 아껴뒀다가 병원에서 읽었다 ^.^ 영화 디어 존의 원작 소설이다. 영화로 나와서 알게 된 작품인데 영화로 나왔을때 딱 보자마자 보고싶었는데 책먼저 읽고 보는게 재밌을 것 같아서 책 먼저 읽었다. 군인인 존과 대학생 사바나의 사랑이야기 이다. 부터 사고만 치고 다니던 존은 군입대를 지원하고 복무중 휴가를 받은 기간동안 봉사활동을 나온 사바나를 만나게 되고 운명적으로 둘은 서로에게 빠져들게 된다. 2주간의 만남으로 둘은 서로를 사랑하게 되었지만 짧은 만남은 2년에서 4년..7년..이렇게 … 더보기
“небольшой трактор с погрузчиком для продажи кубота”
2007 John Deere 9330 4WD Tractor with duals and PTO – Currently sitting on lot. See your LandPro Rep for details. Loading is available: Mon.-Fri. Unit sold as is where is with no warranties or implied.
Данный метод более дешевый и занимает гораздо меньше времени, что позволяет получать “экономный” вариант игристых вин. Если вино произведено таким способом, на этикетке должно быть обозначено: vin mousseaux.
Посевная еще не началась, а Вы уже готовите свой комбайн к уборочной? Правильно, ведь именно сейчас Вы сможете это сделать по самым выгодным ценам! Проведите предсезонную инспекцию у официального дилера John Deere и закажите оригинальные запасные части для вашей техники со скидкой.
“тракторный погрузчик John Deere |большие тракторы John Deere для продажи”
John Deere 6M Series Tractors feature the reliable and proven PowerTech PVS 6.8L and PSS 4.5L and 6.8L engines. These air-to-air aspirated engines deliverapower bulge above rated power provide excellent torque in demanding applications.
Солод, иначе – проросший ячмень, – высушивается над огнем или торфом (что влияет на вкус виски), перемалывается и замачивается горячей водой. В полученный раствор добавляются дрожжи, и после ферментации (брожения) получается весьма похожая на пиво брага, которая дважды пропускается через перегонные (дистилляционные) аппараты pot still и полученный спирт не менее чем на три года заливается в дубовые бочки.
Из карьерных экскаваторов самый большой – Bagger 293. Это название можно видеть в Книге Рекордов Гиннеса. Он значится там, как крупнейший в мире механизм. Вес этого экскаватора более четырнадцати тысяч тонн при длине двести двадцать семь метров.
Those pedals engage the 2305’s Hydrostatic transmission. Smooth engagement during use wasareal highlight on this transmission and made switching from forward to reverse quick while avoiding any “jumpy” starts.
ပိုများသောအလားအလာနည်းလမ်းများတုတ်ကျင်းယန္တရားမလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းလမ်းများအောက်မှာပိုက်ကိုပိတ်လိုက်ရသည်။ ဘယ်အချိန်မှာအစောင့်သို့မဟုတ်အဖုံးများစီစဉ်လမ်းများအောက်တွင်ပိုင်းတွင် trenchless နည်းပညာသုံးပြီးပိုက်ကိုတင်သော, ပြီးတော့သူတို့ကအလုပျသမားသူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုက်လိုင်းများလမ်းခင်းနေကြသည်။ ဒီဖြစ်နိုင်သောစေခြင်းငှါ, အိုးအိမ် (ထည်) ၏အချင်းပိုက်လိုင်း (tab ကို။ 21.1) ၏အချင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ရပါမည်။
ဂ်န္ေဒါင္ဂန္းဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေဘ့စ္ေဘာကစားရတာကို ႏွစ္သက္သူျဖစ္ၿပီး Playboys လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ အေပ်ာ္တမ္း ဆယ္လီေဘ့စ္ေဘာအသင္းမွာ တျခားကိုရီးယားမင္းသားအမ်ားအျပားနဲ႔အတူ အသင္းဝင္ထားပါတယ္။
မိလ္လာကုသမှုအပင်များ၏ကွင်းဆက်အတွင်းပထမဆုံးလင့်ထားသောစာမျက်နှာများ – မွေးမြူရေးအဆောက်အဦးထံမှချေးဖယ်ရှားခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းစနစ်များကို။ Peregudova အဆိုအရထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အဓိကအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားထားပါသည်။ ပထမဦးဆုံး – ထိုစက်မှုစနစ်။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှသူတို့နွားသငယ်နှင့်ပြင်ပ feedlots များအတွက်အိမ်များတွင်မီးဖွားရပ်ကွက်, နွားသငယ်ကိုအတွက်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားခြင်းနှင့်ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထား-စားကျက်, မြည်းကြိုးကိုဖြည်-နှင့်အတူကျွဲနွားမွေးမြူလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါ့အပြင်စက်မှုစနစ်များကို 24 ths အထိစွမ်းရည်နှင့်အတူအသေးစားဝက်အဆောက်အဦများတွင်ဘုံရှိပါတယ်။ အဆုတ်ရုံများတည်ဆောက်အတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုအအေးနည်းပညာကိုအသုံးပြုမယ့်တနှစ်နှင့်ဝက်မွေးမြူရေးခြံအကြီးအကဲလည်းဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများကခြံပေါ်ခေတ်သစ်မိလ္လာကုသမှုအပင်မရှိခြင်း၏ပြဿနာသည်အလွန်လေးနက်ကြောင်းပြောကြသည်။ သူတို့ရဲ့ ICCA ၏လြှပျစစျမီးနဲ့အလိုအလျောက်များ၏ဦးစီးဌာနပါမောက္ခ။ Timiryazeva ဂျော့ခ်ျ Dekterev ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကကျော်ခေတ်သစ်နည်းပညာများ၏နိဒါန်းနှင့်အတူအခြေအနေကရွေ့မပြုခဲ့သူညညျးညူ။ နယူးပစ္စည်းများ (ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများအစားစိတ်မချရ၏ပြီးပြည့်စုံရေစိုခံတာနှင့်အတူရုပ်ရှင်၏ဥပမာ, ဂွ) ကစျေးကွက်အပေါ်ထင်ရှားပေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နီးပါးအသုံးမနေသောလုပ်ငန်းပြန်လည်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏မြင့်ကုန်ကျစရိတ်၏။
အားလုံးစီမံကိန်းများကိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြသည် Zakrevskii ပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးရောနှော, စုပ်စက်နှင့်အပိုက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတစျခုဂွအကြောင်းကို€ 100 အထောင်အသောင်းကုန်ကျနိုင်သည်ဟုဖြည့်စွက်ပြီးကတည်းကပစ္စည်းကိရိယာများ၏ထိုကဲ့သို့သောအစုများ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်လွယ်ကူသည်မဟုတ်တွက်ချက်။ ဒါဟာပစ္စည်းကိရိယာများ၏ထိုကဲ့သို့သောအစု၏ installation အဘို့အပြည့်အဝမလိုအပ်ကြောင်းနားလည်ရန်လည်းလိုအပ် လယ်ယာအယူအဆ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်ပြောင်းလဲမှု, အကျွမ်းကျင်သူသတိပေးနေပါတယ်။ ဒီနည်းပညာ၏အဓိကအားသာချက်ဟုသူကဆိုသည်ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်အခါနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာဝယ်ယူရန်မလိုပါဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးအရှိဆုံးဓာတ်မြေသြဇာ – နိုက်ထရိုဂျင် – အရည်ချေးနှင့်အတူမြေဆီသို့မိတ်ဆက်သည်။ Zakrevskii တိရစ္ဆာန် 800 ဦးခေါင်းများအတွက်လယ်ယာအပေါ်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာ၏ဝယ်ယူဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်ဒီနည်းပညာထက်လျော့နည်း 1.5 နှစ်အတွင်းကိုယ်နှိုက်များအတွက်ပေးဆောင်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Next ကို (ဒီများအတွက်လိုအပ်လည်းမရှိလျှင်) KFH ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်ထားတဲ့သဘောတူညီချက်တရားဝင်။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (နှင့်ကလေးမွေးဖွားလက်မှတ်တစ်နေရာလေးကိုမိတ္တူ) ဖမ်းပြီး။ လက်မှတ်တာဝန် – နေထိုင်ရာဒေသတွင်း၌မြေပြင်ပေါ်တွင်သင်၏အခွင့်အရေးများကိုသက်သေပြဖို့။
မြို့များ, ကအသစ်သို့မဟုတ်အစားထိုးဟောင်းမြေအောက်ကွန်ယက်များတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ မြေအောက်ဆက်သွယ်ရေးတင်သောတဲ့အခါမှာပွင့်လင်းလမ်းစနစ်တကျမြို့ပြယာဉ်ကြောများနှင့်လမ်းများ၏ throughput စွမ်းရည်; လမ်းများနှင့်ယာဉ်အသွားအလာဘေးကင်းဆိုးရွားသန့်ရှင်းရေးအခွအေန; အစိမ်းရောင်နေရာများဖျက်ဆီးခံရသည့်လမျးခရီး, ဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ လက်ရှိအဆောက်အဦများနှင့်အဆောက်အဦများအောက်မှာမိုးသည်းထန်စွာအသွားအလာနှင့်အတူမြို့လမ်းများနှင့်ရင်ပြင်အောက်, ရထားလမ်းနှင့်လမ်းရထားပုဒ်ဘို့မြေအောက်ကွန်ယက်များတင်သော၏ပွင့်လင်းနည်းလမ်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
“ရောင်းရန်ရှိသည် loader ကိုသေးနဲ့လယ်ထွန်စက် l110 deere ဘယ်မှာရောင်းချရန်အသုံးလယ်ထွန်စက် +ပြဂျွန်”
– 2016 ခုနှစ်တွင်လက်ကားစျေးနှုန်းကီလို 1,5-1 ရူဘယ်ကျဆင်းသွား။ သေးငယ်တဲ့ဖရဲသီးဝယ်လိုအား, volumes ကိုလျှော့ချပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်။စိုက်ပျိုးဂျုံ – အတော်များများကဖရုံစိုက်ပျိုးသူများပြောင်းဖူးမှ switched ပါပြီ။ ဤအပိုင်းမှာတော့ဝင်ငွေဖရဲသီးနှင့်ဖရဲသီး၏ထက်လက်ရှိအချိန်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ယခုမှာပိုပြီးများနှင့်အသီးအနှံများတစ်နှစ်, ဤမျှလောက်များစွာသောခြံ, “ဖရဲသီးပစ်” အတိအကျဖြစ်လိမ့်မည် – ပါမောက္ခစက်မှုနည်းပညာသုတေသနအင်စတီကျုအားလုံး-ရုရှားဟော်ရီကာချာ့ Yuri Bykovsky ၏ဌာနမှူးကပြောပါတယ်။ – ဖရဲသီးရှိနေဆဲ အဆိုပါ Volgograd ဒေသတွင်။ ဤသည်စိန့်မိုက်ကယ်နဲ့ Dubovskii ဒေသများရှိရာဖြစ်ပါသည်, ဖရဲသီးအပြင်ဘာမှပေါက်နေသည်။ သူတို့မြင့်မားသောဖရဲသီးနှင့်သခွားမွှေးသီး၏ဘယ်မှာရာသီအလိုက်စားသုံးမှု prikurortnyh ဒေသများရှိ, နိုဒါကိုရှိကြလော့။
ယင်းအခက်အခဲများရှောင်ရှားရန်တစ်ချိန်တည်းဘဏ်လျှောက်ထားခွင့်ရှိလိမ့်မည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှချေးငွေ၏မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်စေ့စပ်သောမဟုတ်ဘဲပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းစီ, တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းချေးငွေနှင့်စပ်လျဉ်းကိစ္စရပ်များအတွက်အရည်အချင်းမရှိတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်အမှုအများပြည်သူငွေကြေးအစီအစဉ်များ၏စာရင်းထဲတွင်ထည့်သွင်းလျှင်, သင်အခြေအနေမှဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုရရှိနိုင်သည်။Next ကိုကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက်လယ်သမားများ၏လှုပ်ရှားမှုများအချို့ကိုစဉ်းစားပါ။
သွေ့ခြောက်သောထုံးစံလာကြတယ်နှင့်စိုထိုင်းသောမြေဆီလွှာများအုပ်စုများငါ-III ကိုအတွက် 1220 မီလီမီတာတစ်ဦးချင်းနှင့်အတူပိုက်၏ Trenchless တင်သောလည်းမှတဆင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည် u-12/60 ဒီဇိုင်းက Hip-roneftesnetsmontazha(ပုံ။ 21.5, တစ်ဦး) ။3400 တစ်အင်အားသုံး KN နှင့် drive ကိုမော်တာ 18 kW ၏လာကြတယ်ပါဝါနှင့်အတူ 12.7 တန်ချိန်တစ်ဦးအလေးချိန်ရှိခြင်းဤသည်မှာ installation ကိုတွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်ချင်းပိုက် 60 မီတာအရှည်ကျော်ကဆိုသည်။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းပြွန်စာရေးမြေဆီလွှာကိုခုခံနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေသည်မှဦးခေါင်း welded ဖြစ်ပါတယ်။ Prime ဦးခေါင်းအတွင်း၌တည်ရှိသောချိတ်ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
ပိတ်ထားသောနည်းပညာကျယ်ပြန့်သောမြို့များမှာအသုံးပြုတဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်ကျော်လွန်ပြီးများမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအရေ features တွေအောက်မှာထားကြ၏ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း, သဘာဝသိုက်အဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ရမရသောဧရိယာအတွက်သက်သာအောက်မှာ ပွင့်လင်းလိုင်း။ ဤရွေ့ကားဤမျှအပေါ်ရွ့, မြစ်တို့သည်, ချောက်ကြီးများနှင့်ပါဝင်သည်။
(ထိုသို့သောအားဖြင့်ကုန်ကြမ်း၏တစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်ပြိုကွဲပေး) အတူတကွချေးနှင့်အတူဖယ်ရှားသောတိရစ္ဆာန်များအသုံးပြုမှုကိုကောက်ရိုးများအတွက်အိပ်ယာအဖြစ်။ ဒါဟာနောက်ချေးယခုနှစ်အပေါ် left, သာထို့နောက်လယ်ကိုအပေါ်ဆောင်ကြဉ်းရှိရာအထူးကွန်ကရစ် pad ပါဘို့လှည်း၏တင်ချခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ Sergei Melnikov အဆိုအရ Urals ဆန်းသစ်နည်းပညာများချေးပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ် sorokogradusnuyu နှင်းခဲထဲမှာ “ဂန္ထဝင်” နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသာအပူခန်းထဲမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကားများ KAMAZ-45143, မကြာခဏရိုးရှင်းစွာအများစုသည်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဆည်းကပ်အချို့ကို “အရေးပေါ်သိမ်းထား” ဟုခေါ်။ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်, ထိုအမှိုက်ပုံအဆောက်အဦများကအပိုင်းပိုင်းခွဲ –7မှ 14 တန်, အမြောက်အများကုန်တင်၏အလင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ –7ကနေ 25 တန်နှင့်မွေးမြူရေးရန်။ tipper KAMAZ-45143ထုတ်လုပ် – ထို Kamas မော်တော်ယာဉ်စက်ရုံကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးထရပ်ကားအမျိုးအစားကိုရည်ညွှန်းသည်။
အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းပါဝါယူနစ် (တစ်ဦးချင်းစီမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဘူတာကို H-403 နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက် DG-170/1150), ပိုက်၏အဆုံးပေါ်နှိပ်အင်အားသုံးထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ကိရိယာ trehbara-၏ရေချိုးတဲ့မြေပြင် core ကိုဖြတ်တောက်ဘို့ရည်ရွယ်ဝန်တင်လက်လှည့်စက်နှင့်၎င်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ထိုဓါးအပိုင်းစနစ်ပါဝင်ပါသည် roller, ထိန်းချုပ်မှုယန္တရားဖို့ဖိအားကိုထိန်းချုပ်အဆို့ရှင်။
အစိမ်းရောင်ချေး။ အစိမ်းရောင်ချေး၏ထိရောက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေအရေးပါသောအခွအေနေဓာတ်သတ္တုဓာတ်မြေသြဇာနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုသည်။ ထိရောက်မှုအစိမ်းရောင်ချေးနီးပါးနှင့်ညီမျှခြေးခွငျးအားဖွငျ့, ဒါပေမယ့်အတွက် phosphorus ကိုနှင့်ပိုတက်စီယမ် contents တွေကိုအတန်ငယ်နိမ့်။ အခြားအအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထက်အများကြီးပိုမြန်မြေဆီလွှာတွင်အစိမ်းရောင်ချေး၏ပြိုကွဲ။ အစိမ်းရောင်ချေးလယ်ထွန်အလင်း-textured မြေဆီလွှာထဲတွင်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်သော topsoil မှအာဟာရမိုဘိုင်းပုံစံများ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုချုပ်တည်းသော။ မြို့သားစုဆောင်းအစိမ်းရောင်ဓာတ်မြေသြဇာနိုက်ထရိုဂျင်ဆုံးရှုံးမှုရပ်စဲသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောဆုံးရှုံးမှုမလွှဲမရှောင်ဖြစ်ကြသည်အခြားအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ၏မြေဆီထဲသို့သိမ်းဆည်းခြင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မိတ်ဆက်စဉ်လုံးဝ, ဖျက်သိမ်းနေကြပါတယ်။ မြေဆီလွှာဖွဲ့စည်းပုံမှာတိုးတက်စေရန်အစိမ်းရောင်ချေး၏သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍအတည်ပြုခဲ့သည်၎င်း၏ဇီဝလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်။ အစိမ်းရောင်ချေးကောက်ပဲသီးနှံ, သူတို့ရဲ့ phytosanitary ဂုဏ်သတ္တိများကိုကျေးဇူးတင်, တိုက်စားမှုကနေမြေဆီကာကွယ်ပေးရန်, အပြင်, ညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်လျှော့ချပေးပါတယ်။
ဒါ႐ိုက္တာရင္လို႔ ျမန္မာပရိသတ္ေတြေခၚၾကတဲ့ ကိုရီးယားမင္းသား ဂ်န္ေဒါင္ဂန္း (Jang Dong-gun) ဟာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔မွာ အခုဆုိရင္ သူ႔ရဲ႕အသက္က ၄၅ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ သူဟာ ယခုအရြယ္အထိ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အႏုပညာေၾကးအျမင့္ဆံုး မင္းသားတစ္လက္ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။
ရွှေဖရုံသီး mace, အကိုင်းအခက်, ပတ်ပတ်လည်-ရှုထောငျ့ကို stem တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးသိရသည်။ အရွက်ကျောက်ကပ်-shaped ဖြစ်ကြောင်း, နှလုံး-shaped, notched သို့မဟုတ် lobed, ဒဏ်ငွေဆံပင်နှင့်အတူ pubescent ။ အဆိုပါပန်းပွင့်တဲ့အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အနီ-လိမ္မော်ရောင်တစ်ဦး elongated အများ၏အသီးတစ်ခုကြားဖြတ်နှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။ လူဇာတိအားဖြင့်သိပ်သည်းဖြစ်ပါသည်, 8-11% သကြားပါရှိသည်။ ညစ်ပတ်ပေရေ-မီးခိုးရောင်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အနားကွပ်တွေနဲ့အလတ်စားမျိုးစပါး, 30-46% ကိုဆီဆံ့။ 1000 မျိုးစပါး 190-220 ဂရမ်၏အလေးချိန်
ကျနော်တို့ကားများ၏နည်းပညာပိုင်း parameters တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက, အဲဒါကိုအနီးနှင့်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးကနေအမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ဿုံသင့်လျော်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ လယ်ထွန်စက်ယုံကြည်မှုနှင့်မြို့ပြဒေသများ၌၎င်း, တိုင်းပြည်နှင့်ခရီးဝေးလမ်းကြောင်းအပေါ်ခံစားရ၏။ ဒီအစက်, အစွန်းရောက်ချမ်းသောကာလ၌တက်စတင်ရန်ဒါလွယ်ကူသောရုရှားနိုင်ငံ၏အခြေအနေများထွက်ရှိသောသင့်တော်ပါတယ်နှင့်ရွှံ့များနှင့်ရှံ့ပွော့အတွက်အကောင်းတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ရှိပါတယ်။
ပြန်လည်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ချေးဘို့ Peregudova အများဆုံးခေတ်သစ်နှင့်ထိရောက်သည့်စနစ်အရတိရစ္ဆာန်များသို့မဟုတ် pyrolysis များအတွက်လောင်စာအပူမီးစက်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်မြေသြဇာအမှိုက်သရိုက်များထဲသို့ကွဲကွာအစိုင်အခဲအစိတ်အပိုင်း၏နောက်ဆက်တွဲအပြောင်းအလဲနဲ့အတူခွဲခြာနည်းပညာ (ခွဲခြာ) ရေဆိုးဖြစ်ပါတယ်။
A: “ေပာ့ ဂြ်န္. မင္း ဘုရားသခင္ကိုသိလား”။B: “ပာင္အင္း မသိဘူး”။A: “အဲ႔ဒါေျပာတာေပါ့ မင္းသာ ေသာၾကာနဲ႔ စေနညတိုင္းဖြင့္တဲ႔ ဘာသာေရးသင္တန္းကို လာရင္သူ႔ကို သိမွာေပါ့”။B: “မင္းကေရာ ကာရုိးလ္ကိုသိလို႔လား”။A: “ပာင္အင္း မသိဘူး”။B: “အဲ႔ဒါေျပာတာေပါ့ မင္းသာ ေသာၾကာနဲ႔ စေနညတိုင္းဖြင့္တဲ႔ဘာသာေရးသင္တန္းကို မလာရင္ မင္းမိန္းမဆီကို လာေနတဲ႔ ကာရုိးလ္ကိုသိမွာေပါ့”
နည်းလမ်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်လာကြတယ်စစ်ဆင်ရေး၏အမြန်နှုန်းကြောင့်ယင်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုတစ်ပေါက်မြန်နှုန်းဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေတံဆိပ်ခတ်။ အတော်ကြာပိုက်လိုင်းများအနီးဒါမှမဟုတ်အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်နီးစပ်သောတင်သောအခါအကြိုးခံစားခှငျ့အများစုဟာခံစားခဲ့ရနေကြသည်။
အဆိုပါပိုကြီးမွေးမြူရေးလယ်ယာစိုက်ပျိုးသည် သာ. ကြီးမြတ်သည့်စုဆောင်းခြေး။ ဤသည်တန်ဖိုးရှိသော bioresources အမျိုးမျိုးသော applications များရှာပါ။ ဒါဟာမကြာခဏဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုသည်။ သိပ္ပံပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အများကြီးကျယ်ပြန့်အတိတ်ကအပြောင်းအလဲနဲ့, ခြေး၏အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။